Omume Xperia X dị ka HTC 10 na Galaxy S7 Edge na ngalaba igwefoto | Akụkọ akụrụngwa
Ọnwụ nke Sony's Z nso jidere ọtụtụ ndị ọrụ na mberede, ebe ọ bụ ụlọ ọrụ Japan kachasị elu na ahịa ama. Iji gbalịa imezu maka nkwụsị ahụ, Sony malitere usoro Xperia, malite ọtụtụ ekwentị anyị nwere ike ịgụnye na ọkwa dịgasị iche, ma ọ dịghị onye bịara dochie ndị kasị elu nso nke smartphones. Otu n'ime isi ihe kpatara ịhapụ ihe a bụ ahịa dị ala nke nso a nwere n'afọ ndị na-adịbeghị anya, n'agbanyeghị ezigbo ngwaọrụ.
Otu n'ime akụkụ ebe Sony na-anọkarị na mpaghara Z, anọwo na ngalaba igwefoto ma ọ dị ka ọ dị ọhụrụ Sony X nso jisiri ike karịrị onwe ya ọ jisiri ike nweta otu ọrụ ahụ HTC 10 na Samsung Galaxy S7 Edge rụzuru na mbụ, na ihe 88. Sony abụwo otu n'ime ndị na-eduga igwefoto igwefoto ọ bụ ezie na ha anaghị eji ndị kachasị mma na ngwaọrụ ha mgbe niile.
Dika ule nke DxOMark mere, arụmọrụ nke Xperia Performance igwefoto nyere bụ ihe ngosi pụrụ iche mgbe a bịara n'ịse foto na ịdekọ vidiyo obere ekele na ọsọ nke nzaghachi ọ na-enye anyị na obere ọkụ chọrọ iji see ezigbo foto, isi okwu Achilles nke ọtụtụ ọnụ ahịa dị n'ahịa.
Arụ ọrụ Xperia X pụtara nke ọma na ogo igwefoto ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na ndị na-azọ otu ọnụ ọgụgụ ebe ọ na-anọchi ma nwee ike dakọtara akara nke igwe foto ama ama kachasị mma taa dịka HTC 10 na Samsung Galaxy S7 Edge. Asịrị ndị kachasị ọhụrụ sitere na Sony bịakwute anyị kwenyesiri ike na ụlọ ọrụ Japan nwere ike ịnwe ebumnuche ịlaghachi na njedebe nke ọdụ ekwentị na ọnwa ole na ole site na ịmalite ihe ga-abụ nnọchi maka Xperia Z5.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ọrụ Xperia X yiri HTC 10 na Galaxy S7 Edge na ngalaba igwefoto
Nkọwa niile akọwapụtara nke Samsung Galaxy Note 7